Kordhi waxtarka Waraabka, Yaree Qiimaha Biyaha iyo Tamarta 25%: Nero ee Wanaajinta Waraabka Majaladda Nidaamka Baradhada
Kordhi waxtarka waraabka, dhimista kharashka biyaha iyo tamarta 25%: Nero ee tayaynta waraabka
в Wararka shirkadda, Waraabka
Sergey Vasilievmusharaxa cilmiga farsamada,
Ku-xigeenka Professor-ka Waaxda "Mashiinnada Beeraha iyo Farsamada Xannaanada Xoolaha" Jaamacadda Beeralayda ee Gobolka Samara
Qofka beeralayda ah ee isticmaala waraabka goobtiisa wax soo saarka si joogto ah waa inuu raadiyaa jawaabaha su'aalaha: Goorma ayaa ugu waxtarka badan waraabinta iyo mugga? Jawaabta saxda ah ee iyaga waxaa had iyo jeer keeni kara Nero, qalabka ilaalinta heerkulka ciidda iyo qoyaanka ay soo saartay Kaipos. Qalabku wuxuu ku guulaystey imtixaanada shaybaadhka ee ku salaysan Samara State Agrarian University.
Astaamaha gaarka ah ee aaladda la soo jeediyay waa: madaxbannaani (uma baahna isku xirka dhexe waxayna shaqeysaa 36 maalmood xitaa iyada oo aan lagu dallacin tamarta qorraxda), gudbinta xogta la habeyn karo iyada oo loo marayo kanaalka GSM, hawlgalka borotokoolka IP-ga ee furan, fududaynta rakibaadda iyo hawlgalka, suurtogalnimada in lagu buuxiyo dareemayaasha kala duwan marka uu codsado isticmaaluhu. Sababtoo ah naqshadeynta monolithic, rakibidda waxaa lagu fuliyaa seddex daqiiqo gudahood, kala-goynta waxay qaadataa wax ka badan hal daqiiqo.
Bariis 1. Qalabka Nero ee qoyaanka ciidda iyo la socodka heerkulka
Bariis 2. Ku rakibida qalabka Nero ee goobta wax soo saarka
Qalabku wuxuu ka kooban yahay (Jaantuska 1) ee jirka, kaas oo ay ku jiraan laba dareemayaal oo lagu cabbiro heerkulka iyo qoyaanka ciidda. Waxay ku yaalaan habka cabbirka qoyaanka uu ku dhaco lakabka xididka, i.e. qoto dheer oo ah 10 ilaa 30 cm, iyo xaaladaha qaarkood laga bilaabo 10 ilaa 50 cm. Waxay ka shaqeeyaan mabda'a cabbiraadda korantada ee ciidda (iyaga oo tixgelinaya halabuurka granulometric iyo cufnaanta). Dareemaha heerkulka iyo qoyaanka ayaa lagu rakibay qaybta sare ee qalabka, sidoo kale waxaa jira loox loogu talagalay isku xirka dhammaan dareemayaasha moduleka GSM, baytari dib loo dallaci karo iyo muraayad cadceed oo dib loogu soo celinayo. Naqshadeynta moodeelka ayaa kuu ogolaaneysa inaad sidoo kale rakibto cabbirka roobka (Jaantus 2, 3) iyada oo aan isbeddel weyn lagu samayn naqshadeynta, tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in si isku mid ah loola socdo qoyaanka ciidda iyo heerkulka, roobabka, iyo sidoo kale heerkulka hawada iyo qoyaanka.
Xogta laga helay dareemayaasha ayaa la qaadaa 60-kii ilbiriqsi kasta waxaana lagu duubaa xusuusta gudaha ee looxa la dhisay, ka dibna waxaa loo diraa kanaalka GSM ee madal waxgaradnimada Agrokeep. Haddii ay dhacdo soo dhaweyn aan xasilloonayn ama lumista buuxda ee shabakadda, xogta waxaa lagu kaydiyaa dhowr bilood gudaha xusuusta gudaha iyo, xaaladaha wanaagsan, isla markiiba la kala qaado. Sidaa darteed, isticmaaluhu waxaa lagu soo bandhigayaa qiimaha tirooyinka labadaba iyo garaafka qoyaanka ciidda ee meelo kala duwan (Jaantus 2, 3). Waxaa intaa dheer, madal caqli-gal ah ayaa suurtogal ka dhigaysa in la doorto xuduudaha xiisaha (mugga, qoyaanka buuxda ama qaraabada).
Bariis 3. Aaladda Nero oo dhammaystiran oo leh afar qoyaan ciidda iyo dareemayaasha heerkulka labada gees, iyo sidoo kale cabbirka roobka
Bariis 4. Sawirka qoyaanka ciidda meelo kala duwan
Si loo fududeeyo isticmaalka nidaamka wanaajinta waraabka, afar aag ayaa lagu muujiyey jaantuska: 1 - aagga cas (goob jilicsan), 2 - aagga jaalaha ah (bilowga walaaca), 3 - aagga cagaaran (huurka ugu fiican), 4 - aagga buluuga ah. (awoodda qoyaanka ugu yar). Jaantusku waxa kale oo uu diiwaangeliyaa xadiga roobabka ( baararka buluuga ah) ee soo galay ciidda roob ahaan ama waraab ahaan. Sidaa darteed, horumarinta ugu fiican ee dalagga la beeray, curyaaminta garaafka ee laga helay dareemayaasha ciidda waa inay ku jiraan aagga cagaaran. Isla marka qalooca qoyaanka dareenka hoose uu u dhaco aagga cas (barta engegan), waa lagama maarmaan in la bilaabo waraabinta heerka loo baahan yahay meel gaar ah oo beerta ah.
Falanqaynta xogta la helay waxay suurtogal ka dhigaysaa in la kormeero ururinta biyaha ee ciidda iyo, haddii loo baahdo, la sameeyo hawlgallo lagu xakameynayo heerkeeda - tusaale ahaan, samee dabacsanaan dhex-dhexaad ah haddii ay dhacdo abuur qolof ah oo ka hortagaysa dhexgalka qoyaan galay jahooyinka hoose.
Waqtigan xaadirka ah, dhowr shirkadood oo ka mid ah gobolka Samara, sida Scorpion LLC, Sev 07 LLC, Zhitnitsa LLC, Orlovka-AIC LLC, waxay horeyba u isticmaalaan qalabkan si ay u wanaajiyaan waraabka. Natiijooyinka waxqabadkooda sanadka 2021 waxay muujinayaan in isticmaalka dareemayaasha Kaipos iyo Agrokeep intelligence platform ay hoos u dhigi doonaan qiimaha biyaha iyo korontada celcelis ahaan 25%, taas oo marka la eego xagga lacagta ay tahay 35000 rubles. laga bilaabo hal goobaabin mashiinka wax lagu rusheeyo oo ballaciisu yahay 800 mitir. Intaa waxaa dheer, la socodka joogtada ah ee habka waraabka ayaa edbiya hawl-wadeennada, taas oo muhiim u ah hawlgalka guuleysiga wax soo saar kasta.
Tags: heerkulka ciidda iyo la socodka qoyaanka
Isticmaal Fursad. Alaabooyinka ilaalinta dhirta ee ilaalinta goosashada
Beeralayda ayaa laga magdhabaa khasaaraha ka soo gaadhay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka iyo saliidaha